किन घट्छ उमेर अनुसार बच्चाको तौल? - Nayapul Online
किन घट्छ उमेर अनुसार बच्चाको तौल?
कात्तिक १६ ,काठमाडौँ । आफ्ना बच्चाको उमेर अनुसारको तौल र उचाइ कम हुँदा हरेक आमाबाबु चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। बच्चाको उमेर अनुसार तौल र उचाइ निकै कम हुनु वा उमेर अनुसार वृद्धि नहुनु राम्रो लक्षण होइन। तौल र उचाइ बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण पनि आमाबुबाले विशेष जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ।
यदि बच्चालाई सही मात्रामा पोषण पुगेको छैन भने उचाइमा असर गर्छ। तौल भनेको घटबढ भइराख्ने गर्छ। बिरामी अवस्थामा बच्चाहरूले खाना रुचाउँदैनन्, यो बेला उनीहरूको तौल घट्छ र गहुँको एलर्जी हुँदा पनिबच्चाको उचाइ र तौलमा गडबडी आउँछ पाचन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। यो समस्या जेनेटिक कारण पनि हो। अहिले नेपालमा यो समस्या पहिचान हुन नसक्दा बच्चाहरूले तौल र उचाइको समस्या भोग्नुपरेको छ।गहुँका परिकारले गर्दा समस्या भएको छ भने त्यस्ता खानेकुरा बार्नुपार्ने हुन्छ। तर, निको भइसकेपछि पुनः खाना थाल्छन् र तौल पहिलाको जस्तै सन्तुलनमा आउँछ।यस्तो अवस्थामा आमाबुबाले एकपटक चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ।
बच्चालाई पोषणयुक्त खानाका साथ साथै शारीरिक कसरत पनि उतिकै जरुरत हुन्छ। नियमित रूपमा तौल लिने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगमा ल्याएको चार्टमा राखेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक नाप हेरेर बच्चाको वृद्धि ठिकसँग भएको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनुपर्छ।
धनुषामा डेढ दशक देखि दरबन्दी नमिल्दा विद्यालयको अवस्था
हस्तकला महासंघको ३८ औं वार्षिक साधारणसभा भोली, निर्वाचन २८ गते हुने